पद नपाएपछि एनआरएनए यूकेबाट बाहिरिए नर्दन आयरल्याण्डका नेपाली | We Nepali
पद नपाएपछि एनआरएनए यूकेबाट बाहिरिए नर्दन आयरल्याण्डका नेपाली
वीनेपाली | २०७४ भदौ ५ गते १४:५३
छलफलका क्रममा एनआरएनए यूके पदाधिकारीसंग नर्दन आयरल्याण्डवासी नेपाली । तस्विरः नेपालीपत्र
लन्डन । चुनावको मुखमा सदस्यता परित्याग गरि वार्ताको टेबुलमा आकर्षक पद खोजेका नर्दन आयरल्याण्डवासी नेपाली अन्ततः एनआरएनए यूकेबाट बाहिरिएका छन् । संघले विधान विपरित उपाध्यक्ष पद अहिले नै दिन नसकिने जवाफ दिएपछि दुःख मान्दै नर्दन आयरल्याण्डवासी नेपालीले अन्ततः सामूहिक सदस्यता परित्याग गरेका हुन् । सदस्यता परित्याग गर्नेमा २८ जना थिए ।
‘हामीले विधान संशोधनपछि अर्को कार्यकालबाट उपाध्यक्ष दिन्छौं । अहिले क्षेत्रीय संयोजकको जिम्मेवारी लिनु भन्दा मानेनन्’, एनआरएनए यूके अध्यक्ष मुछेत्र गुरुङले वीनेपालीलाई भने, ‘दुई दिन छलफल गर्दा पनि उनीहरु संस्थाप्रति उत्तरदायी भएनन्, पदमात्र खोजे ।’
संघले सामाजिक अगुवा र उम्मेदवारहरुसंग राय लिंदा सबैले अहिले दिन नहुने बरु स्कटल्याण्ड जस्तै उम्मेदवार बनेर आउनुपर्ने सुझाएका थिए । आफ्नो माग बमोजिम नभएपछि सोमबार नर्दन आयरल्याण्डका नेपालीले तल उल्लेखित पत्र पठाएर बाहिरिएको घोषणा गरेका हुन् ।
उनीहरुको पत्र जस्ताको तस्तैः
आदरणीय एनआरएनए यूकेका सभापति ज्यू, पदाधिकारी तथा साथीहरु ।
भर्खरै सभापति ज्यू मार्फत आएको निर्णयलाई स्वीकार गर्न नसक्दा हामी दुःखी छौं । नर्दन आयरल्याण्डलाई यसै वर्ष देखि बाहिर राख्ने गरि आधिकारिक रुपमा भएको निर्णयले यहां बस्ने आम नेपालीहरुलाई केवल थप दुःखी मात्र बनाएको छ । हामीले सामूहिक सदस्यता परित्याग पत्र अनि १४ अगष्टको छलफलमा नर्दन आयरल्याण्डको तर्फबाट जुन मान्यताहरु सुस्पष्ट राखेका थियौं, यो निर्णय पश्चात समेत हामी आफ्ना ती मान्यताहरुमा आज पनि अविचलित छौं । हामी हाम्रा तिनै सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक मान्यताहरुमा अडिग रुपमा उभिरहने छौं ।
विधानको भावनाको सम्मान तथा अक्षरसः पालनामा हामी पूर्ण प्रतिवद्ध छौं । हामीले राखेका कुनै पनि विषय विधान विपरित छैनन् । आफ्नो लोलुप आकांक्षा साध्न विधानको नाम लिनु मात्रले विधानको पालना हुंदैन । विधानमा परिच्छेद ११ को निर्वाचन कार्यविधि बाहेक पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको निर्वाचन कसरी हुने भन्ने कहीं कतै उल्लेख छैन् । यस परिच्छेदको दफा ३२.५ मा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय समन्वय परिषदले पारित गरि लागू गरेको नियमावली बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । अतः को कहांबाट कसरी निर्वाचित गराउने भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदले निर्णय लिन सक्छ र नियमावली बनाइ निर्वाचन आयोगलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्छ । विधान बनाइरहनु पर्दैन । हामीले यही विधिबाट समाधान खोजौं भनेका हौं । समावेशिताका लागि उमेदवार बन्ने आरक्षण भनिएको हो तिनीहरुको निर्वाचन दफा ३२.२ बमोजिम संयुक्त अधिराज्य बेलायत भरी बसोबास गर्ने पञ्जिकृत सदस्यहरुबाट हुने हुंदा समेट्न चाहेमा विधान विपरित हुंदैन । यदि हामीले राखेको यो विषयले विधान बाझिन्छ भने महिला उपाध्यक्षका लागी गरिएको आरक्षण कसरी विधान सम्मत भयो ? विधानको दफा १८ मा उपाध्यक्ष ६ जना मात्र भनेको छ । महिला पुरुष भनेको छैन् । त्यही आरक्षण इंग्ल्याण्ड भित्र पर्ने गरि (महिलाका लागि) गर्न सकिने, विधान सम्मत पनि हुने, तर इंग्ल्याण्ड बाहिर पर्ने गरि गर्दा कसरी विधान विपरित हुने ? यो त विधान ब्याख्याको दोहोरो मापदण्ड भयो । यदि सबै क्षेत्र समेट्ने हो भने नियमावली बनाएर जान सकिन्छ । विधान कुर्नु त केवल बहाना हो ।
विधानमा नभएर मात्र हो नत्र नर्दन आयरल्याण्डका लागि जे पनि गर्न तयार छांै भन्नेहरुलाई तपाईं मार्फत एक पटक विधान हेर्न आग्रह गर्न चाहन्छौं । २०१५ मा परिमार्जित विधानमै क्षेत्रीय परिषदको ब्यवस्था छ । तर, हाम्रो यो छलफलमा सहभागी कतिपय साथीहरुले अब विधान संशोधन गरि क्षेत्रीय परिषदको ब्यवस्था गर्न सकिने तर्क गर्नु भएको छ । यसले उहांहरु विधान हेर्दै नहेरी विधानको ब्याख्या गर्नु भएको बुझिन्छ । यसले यो छलफलमा हामीलाई तर्काउन भएका विधानका कुरा तथा हामीलाई समेट्ने भनि सुनाइएका योजनाहरु कति हल्का, सतही तथा आधारहिन छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । समेट्न विधान होइन इच्छा शक्ति चाहिन्छ । २०१५ देखि विधान भएको परिच्छेद ९ को क्षेत्रीय परिषद सम्वन्धि कुरा हामीले सामूहिक सदस्यता परित्याग गर्ने बेला सम्म थन्कियो । यो नै इच्छा शक्ति विना विधानमा जे लेखे पनि केही हुंदैन भन्ने उदाहरण हो ।
हामीले कसैको पद खोसेर हामीले लिइहाल्ने योजनाका साथ आएका होइनौं । हामीले पदलोलुपता देखाएको नभइ हाम्रो समेत अधिकार लाग्ने विषयमा अन्यत्रबाट भएको मरिहत्ते दर्शाइदिएको मात्र हो । अर्काले अनाधिकार ओगटी रहेको आफ्नो अधिकारले भेट्ने वस्तु माथिको भद्र दावी लोलुपता होइन । बरु नछोड्ने प्रवृत्ति चिन्ताजनक छ ।
आगामी अधिवेशनले नर्दन आयरल्याण्डको विषयमा कुरा गर्न मिल्दैन । नर्दन आयरल्याण्ड नभएको एनआरएनए यूकेले यहांको एउटा भागमा बस्ने नेपालीहरुलाई पुरै बाहिर धकेले पछि आफू आफू मिलेर गरेको छलफल त्यति सान्दर्भिक हुंदैन । तर हाल सम्म भएका पहल तथा छलफलको वातावरण नकारात्मक तथा सकारात्मक प्रतिकृयाका लागि हार्दिक धन्यवाद । हाम्रो अभियानको पक्षमा अभिमत जाहेर गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज एनआरएन अभियन्ताहरुमा विशेष आभारी छौं ।
अन्तमा भर्खरै नर्दन आयरल्याण्डलाई नसमेट्ने गरि आएको निर्णयलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरेको जानकारी गराउंदछौं ।
नर्दन आयरल्याण्डका तर्फबाट
नेपाली कम्युनिटी, नर्दन आयरल्याण्ड